Iindaba -Zeziphi iintlobo zeecartridge zokucoca amanzi ezicocekileyo zokucoca amanzi？
Zeziphi iintlobo zeecartridge zokucoca amanzi ezicocekileyo zokucoca amanzi？
ICartridge yokucoca iCartridge isebenze ngamalahle kunye nakwikhokho yekhokhonathi eyenziwe yasebenza ngekhabhon enexabiso eliphezulu lokuthengisa njengezixhobo zokucoca ulwelo, kwaye isintyintyelwe kwaye icinezelwe nge-binder yokutya. Ngaphakathi nangaphandle kwecandelo lekhabhoni yentsimbi ecinezelweyo isongelwe ngokulandelelana kwelaphu elingalukwanga elinomsebenzi wokucoca ukuqinisekisa ukuba isiseko sekhabhoni ngokwaso asizokulahla umgubo wekhabhoni, kwaye iziphelo ezibini zekhabhoni zixhotyiswe zithambile I-NBR gasket, ukwenzela ukuba ikhabhon engundoqo kwi-cartridge yefilitha isebenze kakuhle ngokutywina.
2.I-PP icartridge yokucoca
I-cartridge ye-filter ye-PP ikwabizwa ngokuba yi-PP. Isinyibilikisi esinyibilikisiweyo esivuthelweyo senziwe ngefayibha ene-polypropylene egqwesileyo ngokunyibilika okushushu. Ifayibha ngokungakhethiyo yenza imilo-ntathu yesakhiwo semicropore emajukujukwini. Ubungakanani bepore yemicropore busasazwa kwigradient kwicala lokuhamba kwefiltrate. Idibanisa umphezulu, ubunzulu kunye nokucoca okuhle, kwaye inokuthintela ukungcola ngobungakanani beesuntswana ezahlukeneyo.
3. ICeramic iCartridge yokuhluza
ICeramic iCartridge yokuhluza luhlobo olutsha lwecartridge yokukhusela okusingqongileyo, esebenzisa udaka lwe-diatomite njengezinto ezingavuthiyo kwaye yenziwa yitekhnoloji ekhethekileyo yokubumba. Ubungakanani bepore average ye-0.1 μ m kuphela. Yicartridge yokuhluza ngokuchaneka ngokuhluza okuphezulu.
4. Ikhabhathi yokucoca ulwelo nentlaka
I-Resin luhlobo lwezinto zotshintshiselwano olungenakunyibilika nolunganyibilikiyo. Kukho izigidi zeebhola ezincinci zentlaka (ubuhlalu) kwindawo yokuhluza intlaka yesithambisi samanzi, zonke eziqulathe iisayithi zokutshintshiselana ngentlawulo ezimbi ukufumana i-ion elungileyo. Ihlala isetyenziswa njengecartridge yecebo lokucoca amanzi. Emva kokuhluza, inokugqitha kwi-resin regenerant (ityuwa yamanzi ethambileyo).
5. Icartridge yentonga yetitanium
Icwecwe lokucoca ngentonga yeTitanium lineempawu ezintle njengokumelana nomhlwa, ukumelana nobushushu obuphezulu, amandla aphezulu, kulula ukuqinisekisa ukuchaneka kokucoca ulwelo kwaye kulula ukulihlaziya; Icwecwe lokucoca nge-titanium lenziwe nge-titanium powder ngokwenza kunye nokushisa okuphezulu kobushushu, ke amasuntswana angaphezulu akukho lula ukuwa; Ubushushu bokusetyenziswa emoyeni bunokufikelela kuma-500 ~ 600 ℃; Kukulungele ukuhluzwa kweendaba ezahlukeneyo ezonakalisayo, ezinje ngehydrochloric acid, sulfuric acid, hydroxide, amanzi olwandle, i-aqua regia kunye nezisombululo ze-chloride ezinje ngentsimbi, ubhedu kunye nesodiyam.
6. I-cartridge yefilitha yefilitha yokuhluza
I-membrane ye-Nanofiltration luhlobo lwento esebenzayo enokuchaphazeleka evumela iimolekyuli zokusombulula okanye ezinye izinyibilikisi ezinobunzima beemolekyuli okanye ii-valent ions eziphantsi. Luhlobo olukhethekileyo noluthembisa ukwahlula inwebu. Inikwe igama kuba inokuthintela izinto malunga nobukhulu be nanometer.
7. Umoya ifayibha ultrafiltration inwebu lokucoca ulwelo
Ulenze ifayibha ultrafiltration inwebu luhlobo ultrafiltration ndizayo. Yeyona teknoloji yokuvuthwa kunye neyona ndlela iphambili. Ifayile engenanto enobubanzi obungaphandle: 0.5-2.0 mm, ububanzi obungaphakathi: 0.3-1.4 mm, udonga oluyityhubhu ifayibha izele zii-micropores, ubungakanani bepore bunokuthintela ubunzima beemolekyuli zentetho, ubunzima bemolekyuli yokuqhawulwa kunokufikelela kumawaka ukuya kumakhulu amawaka.
8. RO umva osmosis ndizayo iCartridge lokucoca ulwelo
Imowudi yokuhamba kwamanzi kwi-RO reverse osmosis membrane ivela koxinzelelo olusezantsi ukuya koxinzelelo oluphezulu. Nje ukuba amanzi acinezelwe, aya kuthi aphume koxinzelelo oluphezulu aye kwindawo ephantsi. Kuphela ziimolekyuli zamanzi kunye nezinye ion zamaminerali eziluncedo emzimbeni womntu ezinokudlula. Olunye ucoceko kunye nesinyithi esinzima siyakhutshwa kumbhobho wamanzi amdaka. Le ndlela isetyenziswa kuzo zonke iinkqubo zokuhanjiswa kwetyuwa emanzini kunye nokubuyiselwa kunyango lwamanzi amdaka e-spaceman, Ke ngoko, inwebu ye-RO ikwabizwa ngokuba zizintso zobugcisa bokufakelwa kwi-vitro.
Isihluzi sePp Meltblown Cartridge, Iifilitha zamanzi zeNdlu iphela, Kk Isihluzi seCartridge, iCartridge yokucoca amanzi, Icebo lokucoca ulwelo emgceni, Kk Gac Cto Isihluzi seCartridge,